Siyaasa Oromoo: Qondaalli ABO Abdii Raggaasaa eenyu, maaliif hidhaman? – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooSiyaasa Oromoo: Qondaalli ABO Abdii Raggaasaa eenyu, maaliif hidhaman?
Galaasaa Dilboo, Abdii Raggaasaa fi Dhugaasaa Bakakkoo Asmaraatti
(BBC Afaan Oromoo) — Ajajaan duraanii waraanaa fi qondaalli olaanaa ABO Obbo Abdii Raggaasaa ajjeechaa qondaala mootummaan shakkamuu isaanii abukaatoon isaanii BBC’tti himan.
Qondaalli kuni torban lama dura Guraandhala bultii 29 to’annoo jala kan oolan yoo ta’u, guyyaa kaleessaa yeroo lammaffaaf Wiixata Bitootessa 16 mana murtii magaalaa Buraayyuu argamutti dhiyaataniiru.
Ajjeechaa itti-gaafatamaa waajjira bulchinsaafi nageenyaa magaalaa Buraayyuu Obbo Solomoon Taaddasaa fi yaalii ajjeechaa namoota biroo isaan waliin turan irratti raawwateen shakkamuu fi namoota biroo sadii waliin mana murtiitti dhiyaachuu abukaatoon isaanii Dr Tokkummaa Dhaabaa BBC’tti himaniiru.
Poolisiin qorannoon isaanii walxaxaafi yeroo bal’aa kan fudhatu ta’uu eeruun yeroo dabalataa gaafachuus himaniiru.
Komiin ifa aduu argachaa akka hin jirre, akkasumas maatii fi abukaatoo isaanii waliin wal arguu akka hin dandeenyellee Obbo Abdiin mana murtiif iyyatan sirratee qorannoon isaanii guyyoota 11 jidduutti xumuramee akka dhiyaatu manni murtii ajajeera jedhan.
‘Poolisiin achi-buutee Obbo Abdii himuu qaba’ – Aminastii Intarnaashinal
Obbo Abdii Raggaasaa eenyu?
Akka obboleessi isaanii quxisuu wayita ammaa Kaanaadaa jiraatan, Milkiisaa Raggaasaa, BBC’tti akka himanitti Obbo Abdii Raggaasaa godina Shawaa Lixaa Dirree Incinniitti bara 1969 dhalatan.
Maqaan dhalootaa isaanii Takluu ture, booda gaafa qabsootti seenan maqaan Abdii jedhu moggaafameef.
Barnoota sadarkaa duraa mana barumsaa Dirree Incinniitti, sadarkaa lammataa ammoo Ambotti baratan.
Barnoota sadarkaa lammataa erga xumuranii booda Kolleejji Poolisii galuun Sandaafaatti barnoota ‘Intalajansii’ ykn tikaa baratan.
Bara mootummaa Dargii waggaa tokkoof ministira haajaa alaa keessa qondaala tikaa ta’anii dalaganii turan.
Yeroosuma sagantaa barnoota al-idileetiin yuunivarsiitii Finfinnee galanii muummee barnoota saayinsii siyaasaa barachuu eegalan.
Osoo qondaala mootummaa Dargii ta’anii hojjetaa turanii Adda Bilisummaa Oromoo waliin qunnamtii uummachuun, namoota ijaaruu dabalatee hojii adda addaa hojjetaa turan jedhu obboleessi.
Bara 1991 kufaatii mootummaa Dargiin booda guutummaan guutuutti ABO’tti makamuun hanga ABO’n chaartara keessaa bahuutti qondaalaa tikaa ABO ta’uun tajaajilaa turan.
‘Zoonii Kibbaa jechuun Abdii Raggaasaa jechuudha’
Bara 1992 ABO’n chaartara keessaa bahuun dura Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii Dhihaa gama Wallagga akkasumas zoonii Bahaa gama Harargee keessa socho’aa ture.
ABO’n chaartara keessaa bahuu hordofuun loltoonni TPLF zooniiwwan lamaan kanarratti xiyyeeffatee waraanaa fi hogganoota ABO adamsuu eegale.
Hoggannoonni dhaabichaa gariin ajjeefamanii, gariin ammoo yoo hidhaman gariin ammoo gara biyya ollaatti baqatan.
Haaluma kanaan Obbo Abdii Raggaasaa bara 1993 biyyaa bahanii gara Naayiroobii imalani akka namni yeroo dheeraaf dirree qabsoo isaan waliin turan tokko BBC’tti himanitti.
Erga ABO’n chaartara keessaa bahe bakki waraanni ABO itti gadi of dhaabe Zoonii Kibba lafa Booranaa iddoo Solooloo jedhamutti.
Zoonii Kibbaa kana gadi dhaabuu keessatti ammoo Abdii Raggaasaa nama shoora olaanaa taphate jedhu namni kun.
Namni bara 1993 jalqaba zoonii Kibbaa saaqee bara 1991-92 hogganaa waajjira ABO Nageelle Booranaa kan ture nama Mulugeetaa Baqqalaa Hirphaa jedhamudha.
Namni kun baruma san kan wareegaman. Ergasii booda Abdii Raggaasaa, Olqabaa Lataa fi namoonni kaan gara Soloolootti imaluun Zoonii Kibbaa qubatanii leenjii eegalan.
“Waraanni kun hidhannoos, waan nyaatuufi uffatus osoo hin qabaatiin hamilee itti horee hogganaa waraana kana jiraachisedha” jedhu namni dhihootti isaan beekan kuni.
”Biyya keessatti qunnamtii uumuun, waraanni deeggarsa akka argatu, akkasumas bobbaa loltoota mootummaa irraa aanee akka jiraatu nama taasisedha. zoonii kibbaa jechuun Abdii Raggaasaa jechuudha” jedhu.
Oromoo Booranaa naannoo daangaa Itoophiyaafi Keeniyaa jiraatu biratti Abdiin nama gootummaan beekamuufi daran jaalatamudhas jedhu.
Bara 1998 kora hatattamaa ABO’n Moqadishuutti godhateen miseensa gumii sabaa ta’anii filataman.
1998 hanga 2004 miseensa gumii sabaa ta’anii Zoonii Kibbaa turan. Bara 2004 kora sabaa sadaffaa Eertiraa Asmaraatti taa’amerratti miseensa Shanee Gumii [Hojii Raawwachiiftuu] ta’uun filaman.
Bara 2005 gara Eertiraa imaluun hanga 2018 ajajaa waraana Bilisummaa Oromoo ta’anii hojjetaa turan.
Bara 1999 wayita dirree qabsoo zoonii Kibbaa jiran dhukkuba sombaa daran dhukkubsatanii sadarkaa du’aaf of eeguurra gahanii turan.
Qondaalli nageenyaa magaalaa Buraayyuu akkamiin ajjeefaman?
Yeroos qullubbii adii qorichaaf ta’ullee bitachuuf humna dhabne, qoricha aadaa Booranaa lafa jalaa qotamu Awaachoo jedhamuun akka wayyaa’an himu jaalli qabsoo isaanii gaafas waliin turan.
Ergasii dhukkuba sanarraa guutummaatti akka hin fayyineefi bara 2018 osoo gara biyyaa hin deebi’iin ji’oota muraasaaf wal’aansaaf gara Faransaay deemanii turan.
Maatiin isaanii ammallee achuma Faransaay jiru.
Amalaan nama akkamiiti?
Baay’ee nama hojiiti jedhu Obbo Milkisaan waa’ee obboleessa isaanii angafaa yoo dubbatan.
“Yeroo qe’ee dhufu walitti qabee hojii nu hojjeechiisa ture, taa’uu hin danda’u” jedhu.
“Dallaa nu ijaarsisaa, midhaan qonnaan bultoota naannoo keenya jiranii osoo hin hafiin maaliif hin aramne jedhee nu aramsiisa ture” jedhu.
Nama firoota isaa waliin hariiroo jabaa qabuufi nama firas walitti qabudha jedhu.
“Nama hojiiti malee nama guddoo mul’achuu barbaadu miti. Gara miidiyaatti bahanii haasa’uu, of mul’isuu waan jedhu kana hin jaalatu.”
Erga gara biyyaa deebi’anii booda dargaggoota waliin
Jaalleen qabsoo isaanii waggoota dheeraa akka waliin turan nutti himanis, “Abdiin akkuma maqaa isaati” jedhu.
“Qabsaa’ota birattis, hogganoota birattis nama jaalatamu, akka hogganaa waraanaatti lolee kan lolchiisu, ajajuu qofa osoo hin taane hojjetee kan hojjechiisudha” jedhu.
Mootummaan Itoophiyaa hogganoota ABO durii kaasee addatti barbaachaa ture keessaa tokko Abdii Raggaasaati jedhu namni kun.
“Humna leenjiifi hidhannoo addaa qabu bobbaasee, akkasumas karaa Imbaasii Itoophiyaa Naayiroobii jiruu yeroo adda addaa hidhuuf yaalii gochaa ture” jedhu.
Obbo Solomoon Taaddasaa akkamiin yaadatamu?
Hidhamuun isaanii kunis sanumaan wal qabata jedheen yaada jedhu namni maqaan isaanii akka hin eeramne nu gaafatan.
Erga qabsoo nagaaf jecha gara biyyaa deebi’ee “hariiroon inni waraana waliin qabu hin jiru” kan jedhan namni kun, haa ta’u malee hojiilee dhaabaaf wayita Oromiyaa keessa socho’aa ture humna nageenyaan hordofamaa turuu dubbatu.
Osoo qabsoo nagaatti hin deebi’iin ajajaa waraanaa waan tureef, isa yeroo saniin yoo himatan malee erga qabsoo nagaatti deebi’ee duuba hojii waajjira banufi nama ijaaruu irratti hojjetaa ture jedhu obboleessi isaaniis.
“Erga biyyatti deebi’ee booda itti gaafatamaa hojii ijaarsaa fi jaarmiyaa kan godina jiddugaleessaa ta’uun dhaabni ramadee hojjetaa akka turan quba qaba” jedhu.
Hidhamuu mala kan jedhu shakkaan ture, of eeggadhu jedhees itti himeen ture. “Qabsoo filatanii sodaachuun hin ta’u” nuun jedhe jedhan.
Obbo Abdiin mana murtiitti yeroo dhihaatan kanneen itti shakkaman keessaa ajjeechaa qondaala nageenyaa magaalaa Buraayyuun alatti waraana araara mootummaa fudhachuu dhabuun bosonatti hafe waliin ammallee hidhata qabdu jedhamaniiti.
Afandii Muttaqii tiin | Bitootessa 24, 2021 ABO_Shanee? Namootni yeroo jalqabaatiif maqaa akkana je’uun dhaaba…